एउटा दुःखान्त अन्त्यः यो हो चार जना मित्रहरुको अन्तिम सेल्फी ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /International/एउटा दुःखान्त अन्त्यः यो हो चार जना मित्रहरुको अन्तिम सेल्फी !
हामी भारा काहुमा ठूलो संख्यामा उभिएका छौं । हामीलाई न हाम्रा आफन्तको शव दिइएको छ न अगाडि जान दिइएको छ ।’
पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबाद नजिकै पंजाब प्रान्तको पर्यटकीय स्थल मरीमा भारी हिमपातमा मारिएका २२ पर्यटकमा मरदानमा बस्ने ४ मित्रहरु पनि थिए । उनीहरुका नजिकका मित्र फैसल खानले भने ‘हामी प्रशासनसँग अनुरोध गरिरहेका छौं कि उनीहरुलाई बचाउन त सकिएन अब उनहिरुको शव हामीलाई दिइयोस्।’
यो विपत्तिमा मरदानका ४ युवकहरुको मृत्यु भयो । उनीहरु असद खान, सुहैल खान, बिलाल खान र अहिले कराची बस्दै आएका बिलाल खान थिए । यी चारैजना मरदानको एउटै इलाकाका हुन् र सबै आपसमा कजिन थिए ।
चार साथीहरुमा जेठा सुैल खान थिए जसको उमेर २५ वर्ष बताइएको छ । उनको बिहे भइसकेको थियो र २ सन्तान छन् । अन्य २ जनाको उमेर करिब २२ वर्ष थियो ।